Maxaa ka jira qorshaha xubno aan u dhalan beesha Jawaari looga dhigayo guddoomiyaha BF? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa ka jira qorshaha xubno aan u dhalan beesha Jawaari looga dhigayo...
Maxaa ka jira qorshaha xubno aan u dhalan beesha Jawaari looga dhigayo guddoomiyaha BF?
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaanka Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil; ayaa kamid ahaa Mudanayaashii waday Mooshinkii ka dhanka ahaa Afhayeenkii Golaha Shacabka Xildhibaan Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari ee Kolkii dambe is casilay.
Xildhibaanka waxa uu sheegay in awood qeybsiga lagu kala qaatay Hay’adaha Dowladda lagu qeybin doono, kaliyana Xilka looga wareejin karo kolka ay ku heshiin waayaan.